ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက် အာမခံထားပြီးပြီလား ? (Physical Insurance) – Coursecom
ဖတ်ရန်ကြာချိန် (၃) မိနစ်
ခန္ဓာကိုယ်က ဟိုနာ၊ ဒီနာ၊ အကြောတွေတက်၊ ကျီးပေါင်းတွေတွက်၊ အသက်က ကြည့်တော့လည်း အိုနေတဲ့ အရွယ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ခန ခန ညောင်းလွန်းလို့ အနိပ်ခန်း မှာ သွားသွားအနိပ်ခံ ရတာလည်း အမော …
ဒါဆိုရင် သေချာပါတယ်။ မိတ်ဆွေ တစ်နေ့တစ်နေ့ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်လိုပါပဲ။
ဒီနေ့ ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ Physical Exercise တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ လေ့ကျင်ခန်းကို နေ့တိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးချင်တာပါ။
တနည်းအားဖြင့်တော့ ဒါဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံခိုင်မှု ၊ အသက်ရှည်ရှည်နေရဖို့အတွက် အာမခံ ထားထားတာပါပဲ။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တယ်လို့ပြောရင် အချို့ကလည်း မျက်စိထဲ ပြေးမြင်ကြတာက၊ Gym တွေသွား၊ အားကစားဝတ်စုံကြီးတွေ ဝတ်၊ Shoes တွေစီးပြီး လုပ် အချိန်တွေ ပေးရမဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးတွေ မျက်စိထဲ သွားမြင်ကြတော့တာပဲ။
အချို့ကလည်း အားရပါးရပဲ ငါ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ် ကွ ဆိုပြီး Gym မှာ တစ်လ စာတွေ ဘာတွေသွင်းကြ၊ နောက် ၃ ရက်လည်း သွားပြီးရော ပြန်ပျက်ပြီး ဒုန်ရင်း ဒုန်ရင်း အိပ်လိုက်စားလိုက်၊ အလုပ်လုပ်လိုက်နဲ့ ပဲ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ကြ ပဲနေကြပြန်ပါရော။
လေ့ကျင်ခန်း လုပ်တယ် ဆိုတာကို အချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကြီးပေးမှရမယ် လို့ ထင်နေတာကို က Mindset အလွဲကြီးလို့ ပြောရမှာပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာက မိမိ အိမ်ထဲ နေရင်းလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ အခု ပြောချင်တဲ့ သတင်းစကားကလည်း မိမိ အိမ်မှာပဲ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း မဖြစ်နေလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တာပါ။
ရေမချိုးခင်မှာ ခေါင်းကနေ ခြေထောက်ထိ လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရင်း မိမိ အသက်ရှုနှုန်းကို ပြန်သတိထားလာနိုင်မယ်။ မိတ်ဆွေ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ လွယ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးကို တောင် အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလား။
အသက်မကြီးသေးပေမဲ့ ဇက်က နာ၊ ဒူးကနာ၊ အစစ်လေးတွေ နာဖြစ်မနေဘူးလား၊ ပြီးတော့ တစ်နေ့လုံး အလုပ်ခွင်ထဲမှာ နေရင်ရော လှုပ်ရှားမှုက လေးလေးပင်ပင်ကြီး ဖြစ်မနေဘူးလား၊ နောက်အရေးကြီးဆုံး တစ်ချက် က မိတ်ဆွေ ဗိုက်တွေ ပူလာမယ်၊ မလိုတဲ့နေရာတွေ မှာ အဆီပိုတွေ ထွက်နေတယ် မလား၊
သေချာပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ဘဝ မှာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းကို မလုပ်တော့တာ။ အညောင်းထိုက်ကြတဲ့ သူတွေ ဆိုပိုလို့တောင် ဆိုးပါတယ်။ မိမိ ကိုယ်ကို ချိနဲ့နေတဲ့ သူလို ဖြစ်၊ တစ်နေ့တစ်နေ့ ရုံအလုပ်လုပ်နေရတာ မရွင်မလန်း နဲ့ ငယ်ငယ် က သွက်လင်မှုကို ပဲ ပြန်လိုချင်နေသလို။
စိတ်မပူပါနဲ့။ အခု က စရင် မှီပါတယ်၊ အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီးရင် လေ့ကျင့်ခန်း စလုပ်မယ်။ (၁၅) မိနစ် ထက် မပိုဘူး၊ စောစောတော့ ထပေါ့နော်။ တော်ကြာ ရုံးသွားချိန်တွေ နဲ့ တိုက်နေတာတို့ နောက်ကျလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ မလုပ်ဖြစ်ပဲ နေမှာ စိုးလို့ပါ။
ပထမဆုံးနေ့က တော့ ဘယ်တုန်းက မှ မလုပ်တော့တဲ့ ဒဏ်တွေ ကြောင့် တော်တော် လေးခက်မယ်၊ အကြောတွေလည်း တင်းနေမယ်။ တော်တော်နဲ့ကို မလျော့နိုင်ဖြစ်နေမယ်။ စိတ်မပူနဲ့ နောက်ရက်တွေ ဖြစ်သွားမယ်။ စလုပ်တဲ့ ရက်က စပြီးတော့ကို လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်သွားမယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခု အရေးကြီးတာပါ လမ်းလျှေက်လေ့ကျင့်ခန်းလေး လုပ်ဖို့ ပါ။ အပြင်မှာ မဟုတ်တောင် မိမိ အိမ်ရှေ့နဲ့ နောက်ကို ပုံမှန်လေး (၁၀) မိနစ် လောက် လျှောက်ပါ။ အလုပ်လုပ်ရင်း လျှောက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ် လျှောက်တာကိုပြောတာပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ဖို့ အတွက် ခြေလှမ်း (၁၀၀၀၀) နေ့စဉ် လျှောက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် ကတော့ စိတ်ချပါ၊ တော်ရုံတန်ရုံရောဂါ ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာဝေးပါတယ်၊ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အတွင်းကလီစာ တွေ ရဲ့ သွေးလေ လည်ပတ်မှုတွေ က မှန်မယ်၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့၊ သွေးပေါင်ချိန်လည်း မှန်မယ်၊ Body Weight လည်း မှန်မယ်၊ ချုံပြောရရင် ကျန်းမာရေးကောင်းမယ်ပေါ့၊
အနောက်နိုင်ငံ က သူ တော်တော်များများ က သူတို့ အတွက် လုပ်သင့်တဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းကို အမြဲမပြတ်လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးပေမဲ့လည်း ကျန်းမာတယ်၊ နုပျိုတယ်လို့ လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက သူ တော်တော်များက အသက် (၄၅) လောက်ဆို မိမိ ကိုယ်ကို လျော့ချလိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ ကို သိပ်အာရုံမရှိတော့ဘူး။ အခု (၃၀) ကျော်တွေ ဆိုလည်း ထိုနည်း၄င်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီဒဏ်တွေ ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ထိခိုက်လာတာ၊ ရောဂါရဲ့ ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်တာတွေ ပိုခံလာရတဲ့ အခြေခံဖြစ်လာပါတယ်။
စပြီး လုပ်ကြည့်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့နေ့နဲ့ မလုပ်တဲ့ နေ့ က သိသိသာသာ လန်းဆန်းမှုက ကွာခြားနေလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခု ကတော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝ ကျန်းမာရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲ။
0 responses on "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက် အာမခံထားပြီးပြီလား ? (Physical Insurance)"